बाढीको बबण्डरः २३ को मृत्यु, ४ बेपत्ता झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट जलमग्न – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / बाढीको बबण्डरः २३ को मृत्यु, ४ बेपत्ता झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट जलमग्न
बाढीको बबण्डरः २३ को मृत्यु, ४ बेपत्ता झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट जलमग्न
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर August 12, 2017	Comments 55 Views
८ साउन काठमाडौं । शुक्रबार राति अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले देशैभरि बबण्डर मच्चाएको छ । शनिबार विहानसम्म प्राप्त विवरण अनुसार विभिन्न जिल्लामा २३ जनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं घर बगेका छन् भने सैयौं विघा जमिन र बालीनालीमा क्षति पुगेको छ ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बाढी र पहिरोमा परेर २३ जनाको ज्यान गएको छ भने चार जना हराइरहेका छन् ।
पश्चिम नेपालका तीनवटा पक्की पुलहरु बगेका छन् ।
Previous: ‘बन्दरगाह’ जस्तै बन्यो बिराटनगर विमानस्थल ! अस्पताल डुब्यो, सवारी साधन देखिन छाडे
Next: चीनसँग लफडा हुँदा सुष्माले नेपालसँग यसरी मागिन सहयोग, महराले पूरा गरिदिए !
तपाइँ को अमुल्य सुझाव सल्लाह अनि लेख रचना ताजा खबर र बिज्ञापन को लागि हामीलाई इमेल गर्नुहोला email : shubhabihani.com[email protected]